नरेन्द्र रौले web version is here:- http://www.kantipuronline.com/Nepal/show.php?&sid=5142
सन् १९७१ तिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा इन्स्िटच्युट अफ मास कम्युनिकेसनको विद्यार्थी थिइन्, माहसिद । पहिलो हेराइमै मानिसको मन लोभ्याउने सुन्दरताकी धनी माहसिद आफ्नो रुचिको विषय अध्ययन गर्न इरानबाट नयाँदिल्ली ओर्लेकी थिइन् । तर, मुहारमा इरानीपन देखिँदैनथ्यो । उनलाई खोजी हिँड्ने युवा भारतदत्त कोइरालाका आँखामा त झन् उनी काटीकुटी नेपाली थिइन् । साडी-चोलोमा सजिँदा कसैले इरानी भन्दैनथ्यो । त्यही भएर पनि सहपाठीको सामान्य चिनाजानी विस्तारै झाँगिँदै गयो र भेटघाटहरू पनि बाक्लिँदै गए । यो क्रमलाई एक वर्षभन्दा बढी तन्काउन सकेेन अवस्थाले । र, एकदिन भारतदत्तले माहसिदसँग विवाह-प्रस्ताव नै राखे । आगो त उता पनि उत्तिकै लागेको थियो । त्यसैले माहसिदले पनि स्वीकारोक्तिमा टाउको हल्लाइन् अनि दिल्लीमै विवाह गरे उनीहरूले र काठमाडौँ आए । मृत्युवरण गर्नुअघि छोराले घरजम गरेको हेर्न चाहने आमालाई बुहारी देखाउन नपाए पनि भारतदत्तको रोजाइलाई शिक्षित बुबाले अन्यथा ठानेनन् । उसै पनि माहसिद नेपालीजस्तै देखिन्थिन् । बुहारी बनेर काठमाडौँ आएको केही समयपछि उनी झम्सिखेलस्िथत आइजे पायोनियर स्कुलकी पि्रन्सिपल बनिन् । बिहेको एक वर्षमा छोरा समीर र त्यसको चार वर्षपछि छोरी शवनम जन्मिइन् । यसरी माहसिदसँग बिताएका स्वणिर्म १४ वर्ष भारतदत्तका लागि सधैँ अविस्मरणीय छन् । तर, त्यसभन्दा लामो जीवनको साथ दिन सकिनन् महासिदले । उनको देहावसानपछि ६७ वषर्ीय भारतदत्तको दोस्रो दाम्पत्य जीवन अमेरकिी जोएनसँग बितिरहेको छ । माहसिद दिवंगत भएको पाँच वर्षपछि १९९१ मा भारतदत्तसँग विवाह गरेकी जोएन कुनै बेला माहसिदले सञ्चालन गरेको बहाई राष्ट्रिय केन्द्रका शिक्षकहरूलाई तालिम दिन्छिन्, अहिले । जोएनका अनुभवमा भारतदत्तमा सहयोगी, सरल, निःस्वार्थ, ठट्यौलो र अरूको मनको कुरा बुझ्ने गुणहरू छन् । भन्छिन्, "भारतदत्त एक जना राम्रा कुक पनि हुन् ।
उता भारतदत्तलाई दयालु जोएनको सबैसँग चाँडै घुलमिल हुने स्वभाव र सेवाभाव मनपर्छ । उनीहरूको विगत पनि कस्तो संयोगको छ भने माहसिदकी साथी जोएन २७ वर्षअघि पहिलोपल्ट नेपाल आउँदा उनलाई लिन भारतदत्त नै विमानस्थल पुगेका थिए । परििस्थतिले कालान्तरमा उनीहरूलाई जीवनसाथी बनायो ।भारदत्त र मासहिदका दुवै सन्तान अहिले अमेरकिामा छन् । छोरी सवनम, ३३, युनिभर्सिटी अफ सान पmान्सिस्कोमा प्रोफेसर छिन् भने छोरा समीर, ३६, हार्वर्ड मेडिकल स्कुलमा न्युरो साइन्टिस्ट । समीरले फिलिपिनो केटीलाई जीवनसंगिनी बनाएका छन् भने सवनमले इरानी युवक रोजेकी छन् । ललितपुर, सानेपाका शैलेश भट्ट, ३१, लाई ललितकलामा स्नातक गररिहेका बेला 'लाइभ पोटे्रट' गर्ने सुर चल्यो । त्यही सुरमा उनी क्यान्भास र कुची लिएर पशुपतिनाथ मन्दिरवरपर घुम्न थाले, बाबाजीहरूको तस्िबर उतार्दै । संयोग कस्तो भने जापानी विद्यार्थी शिजुयो शिम्मेई पनि यही बेला पशुपतिको फन्को लगाउन आइपुगिन् । उनको पनि उद्देश्य उही थियो, लाइभ पोट्रेट । एउटै ठाउँ र एकै पेसाले गर्दा उनीहरूलाई भेट गरायो । सँगै बसेर उनीहरूको लगातार तीन महिना पेन्टिङ् चल्यो । शिजुयो जापान फर्केपछि थाहा भयो, पशुपति कालमा अरू पनि धेरै कुरा भएछन् । कारण, उनलाई शैलेशबिनाको जापान नुनबिनाको तरकारीजस्तो खल्लो लाग्यो । उनी एक्लै बस्नै सकिनन् । शैलेशलाई टोकियो ओराल्ने अवस्था नभएपछि शिजुयो नै काठमाडौँ आइन् । शैलेशले विदेशी केटीसँग दाम्पत्य जीवन बिताउँला भनेर नसोचेको भए पनि नसोचेकै तालमा विवाह भयो । पाँच वर्षदेखि सानेपामा जलान-जलान रेस्टुराँ खोलेको यस जोडीलाई झरी परेको एक मध्याह्नमा भेट्दा शिजुयो ल्यापटपमा औँला चलाउँदै थिइन् भने शैलेश अखबारमा आँखा घुमाइरहे का थिए । शैलेशको समाजमा जीवन बिताउने तयारीको क्रममा विश्वभाषा क्याम्पस पढेकी शिजुयोलाई नेपाली बोल्न कुनै कठिनाइ हुने कुरै भएन । उनी नेपाली खाना बनाउन पनि पोख्त छिन् ।
पेन्टिङ्सँगै संगीतमा रुचि राख्ने उनले तीन वर्षअघि नै एउटा एल्बम निकालेकी रहिछन्, अतिथि । नेपाल कस्तो लागिरहेको छ त ? भन्छिन्, "कस्तो लाग्नु र ! अब त आफ्नै भइसक्यो ।" यता शैलेशले पनि हरेक वर्ष ससुराली देश जापान जाने चलन बसाएका छन् । काठमाडौँ, बौद्धका मणि लामा, ६२, ले अमेरकिामा फोटोग्राफी र कृषि विज्ञान पढे । फोटो खिच्न देशविदेश दौडिए । यही मेसोमा एकपटक मनाङ पुगे, जहाँ एक जोडी फिलिपिनोसँग भेट भयो । त्यसताका मणि पोस्टकार्डको काम पनि गररिहेका थिए । फिलिपिनो जोडी लामाका केही प्रति पोस्टकार्ड बोकेर आफ्नो देश फर्कियो । उनीहरूले लगेका मणिका पोस्टकार्ड फिलिपिन्समा पढ्दै गरेकी अमेरकिी युवती मेरी डेथका हातमा पनि परे । यही पोस्टकार्डले जुराएको भेट मायालु बन्दै गएपछि ४० वर्षे उमेरमा २७ वर्षकी मेरीसँग विवाहको लम्बे योजना बुने, लामाले । यसरी २२ वर्षअघिको यो पोस्टकार्डको कथा रमाइलोसँग प्रेम र विवाहसम्म फैलियो । परण्िााम, उनीहरूको सुखद दाम्पत्य जीवनले बाइसौँ वाषिर्कोत्सव मनाउँदा छोरी मरनिा, २१, र मिसेल, १९, ले 'ए' लेभल स्तरको पढाइ सकेका छन् । उता सुदूर बेलायतको सुन्दर सहर वेस्ट योर्कसायरमा जन्मेकी ग्रेटा राणा, ६६, क्यासलफोर्ड सहरमा हुर्किइन् । शिक्षिका आमा र राजनीतिज्ञ बुबाले हुर्काइरहेका बेला सात वर्षकै उमेरमा शेक्सपियरका साहित्यले छोइसकेको थियो, ग्रेटालाई । नभन्दै आजीवन साहित्यमै लागेकी उनी म्यान्चेस्टर युनिभर्सिटीमा स्नातक तहको साहित्यको विद्यार्थी छँदा नेपालका मधुकरशमशेर राणासँग आँखा चार भयो । करबि ५० वर्षअघिको त्यस समयमा युवा मधुकर एडभान्स स्टडिज इन् इकोनोमिक्स डेभलप्मेन्ट विषयमा पोस्ट ग्ा्रयाजुयट गर्न बेलायत पुगेका थिए, जो ग्रेटाको बौद्घकि लेखनबाट औधी प्रभावित भए । हेर्दाहेर्दै यो प्रभाव प्रेममा परण्िात भयो र प्रेम फेर िविवाहमा रूपान्तरति । ग्रेटा भन्छिन्, "मधुकर ह्यान्डसम मात्र होइन, अर्थशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गहिरो दख्खल राख्ने युवक थिए, त्यसबेला ।
तिनै ह्यान्डसम युवकसँग विवाह गरेर २८ वर्षको उमेरमा नेपाल पसिन् ग्रेटा । यहाँ आएपछि भाषा उनका लागि ठूलै समस्या बन्यो । काठमाडौँमा चीजकुमार श्रेष्ठसँग नेपाली भाषा सिकेकी यी बेलायती चेलीले नेपाली बुहारी भएपछि भाषा बुझेरै 'सेतो बाघ'लगायत केही कृतिहरू अंग्रेजीमा अनुवाद गरनि् । यद्यपि, उनको परचिय भने अनुवादकभन्दा लेखककै रूपमा स्थापित छ । नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्काको आफ्नै पे्रमकथा छ । उनी पनि नेपालमा विदेशी श्रीमती भित्र्याउने व्यक्तिमा पर्छन् । भारतमा विद्यावारििध गरेर थप अध्ययनका लागि जर्मनी पुगेका खड्का र भौतिकशास्त्रकी क्यानेडियाली विद्यार्थी इसाबेलाको युरोपमा भएको भेट एकदिन बडो रमाइलोसँग प्रेमका सीमाहरू उक्लँदै विवाहमा परण्िात भयो । परचिय र केही वर्षको प्रेमपछि यी दुईले ०४५ सालमा दुईपटक विवाह गरे । पहिलो विवाह, क्यानाडामा इसाबेलको सम्प्रदायका लागि इसाई धर्म अनुसार र दोस्रो काठमाडौँमा नेपाली समाजका लागि हिन्दु परम्परा अनुसार । यसैगरी, ४६ वर्षअघि सिंगापुरमा जन्मे का गायक रवीन तामाङ नेपालमा रक ब्यान्डका 'पायोनियर' मानिन्छन् । सम्भवतः चार युवा सम्मिलित 'रवीन एन्ड न्यु रभिोलुसन' नै नेपालको पहिलो रक सांगीतिक समूह हो । यिनले हेलेन तामाङलाई विवाह गरेर पmान्सलाई ससुराली देश बनाएको ११ वर्ष भयो । पेन्टिङ्की विद्यार्थी हेलेनसँग १२ वर्षअघि रवीनको पहिलो भेट ठमेलको एक रेस्टुराँमा भएको थियो । अहिले ११ वर्षकी छोरी ताराकी बाबु रवीन गीत-संगीतमार्फत समाजसेवामा छन् । सांगीतिक कार्यक्रमबाट टुहुरा बालबालिका, एचआईभी पीडितहरूलाई सहयोग जुटाइरहेका छन्, जसमा हेलेनको पूरापूर साथ छ । नेपाल, आधुनिक आँगनमा, भुलमा भुल्यो, १३०००, केटाकेटीजस्ता एल्बमका यी सर्जक दुव्र्यसनीलाई संगीतले सुधार्न सकिने मान्यता राख्छन् । भन्छन्, "किनभने संगीत स्वयं एउटा नसा हो ।"
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 12:44 AM
सलाम सबै नेपालीलाई ! बेलायती अभिनेतृ जोआन्...
सुदूरपश्चिममा बाढीले दर्जनौं घर बगायो थुप्रै बेप...
विदेशी बुहारी नरेन्द्र रौले web version is here...
कपालबाट बिजुली Narendra Raule you can read also ...
Teaching for critical thinking KEDAR BHAKTA MATHEM...
famous writer Samrat Upadhyay ...
कृपया, पाँच रूपैयाँ दिनोस् न ! नितान्त व्यक्तिगत र...
यिनै साथी ले खाजा बनाएर खुवाएका थिए ।
झरीमय काठमाडौं झम्झम झरी परिरहेको छ काठमाडौंमा । म...